Topnepalnews.com | नयाँ शक्तिको चन्दा उठाउने नयाँ जुक्ति,उम्मेदवार बन्न २० हजार,२० लाख भन्दा बढि चन्दा नलिने
Posted on: May 03, 2016 | views: 299
काठमाडौं,फागुन १८ । एमाओवादी परित्याग गरि नयाँ शक्तिको संयोजक बनेका बाबुराम भटट्राईको पार्टी नयाँशक्तिले पार्टी चलाउन नयाँ जुक्ति निकालेको छ । मंगलवार केन्द्रीय सचिवालयको बैठक केन्द्रीय कार्यालय बबरमहल काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खर्च चलाउने र चन्दा उठाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ शक्ति नेपाल आफ्नो संगठन सञ्चालनका आधारभूत खर्चहरु धान्न पराश्रित हुनुहुँदैन भन्ने धारणा राख्दै कार्यविधी सार्वजनिक गरेको हो ।
-नयाँ शक्ति नेपाल आफ्नो संगठन सञ्चालनका आधारभूत खर्चहरु धान्न पराश्रित हुनु हुँदैन भन्ने धारणा राख्दछ.। त्यसैले सदस्यहरुले गर्ने आर्थिक योगदान नै हाम्रो संगठन सञ्चालन र खर्चको महत्वपूर्ण स्रोत हुनेछ । जसकालागि नयाँ शक्ति नेपालको सदस्यता शुल्क रु. १०० तोकिएको छ । प्रत्येक सदस्यले साउन १ गते देखि मङ्सिर मसान्त भित्रमा रु. १०० वार्षिक सदस्यता नवीकरणशुल्क बुझाउन पर्नेछ । यसैगरी पार्टीका विभिन्न तहमा उम्मेद्वार हुन चाहनेले निश्चित शुल्क तिर्नुपर्ने कार्यविधिले ब्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार पार्टीको गाउँपरिषद् सदस्यको उम्मेदवारले रु. २००, नगरपालिकापरिषद् सदस्यका लागि रु.५००, जिल्लापरिषद् सदस्यका लागि रु. २,००० र केन्द्रीय परिषद सदस्यको उम्मेदवार हुनकालागि रु. ५,००० शुल्कको ब्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी राज्यको गाउँ सभा, नगर सभा, प्रदेश सभा, प्रतिनिधि/राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहनेले क्रमश: रु. ५००, रु. १,०००,रु. ५,००० र रु. २०,००० शुल्क तोकिएको छ । यो शुल्क तिरेपछि उम्मेदवारहुने सदस्यहरूको निर्वाचन आयोगले तोकेअनुसारको शुल्क भने सम्वन्धित तहको पार्टीले नै बुझाउने छ ।
नयाँ शक्ति नेपालले चन्दा संकलनका बिषयमा समेत विधि र सीमा निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार विनाशर्त एक आर्थिक वर्षमा व्यक्तिबाट रु. ५०,०००।०० (रु. पचास हजार) र संस्था, फर्म, कम्पनीबाट रु. २०,००,०००।०० (रु. बीस लाख) भन्दा धेरै चन्दा लिइने छैन । यसका साथै विदेशी नागरिक, वहालवाला सरकारी कर्मचारी तथापूर्णत: नेपाल सरकारको अनुदानमा आश्रित वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्थाका कर्मचारी,प्रचलित कानुन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी वा सार्वजनिक ठेक्कामा गलत काम गरी कालो सूचीमा परेको व्यक्ति, फौजदारी अभियोगमा जेल परेको व्यक्ति, भ्रष्टाचारको अभियोगमा छानबिनको क्रममा रहेको, मुद्दामा रहेको वा अदालतले भ्रष्टाचारी भनी फैसला गरेको व्यक्ति, विदेशमा दर्ता भएको संस्था, नेपालमा दर्ता भएको भएपनि बिदेशी सरकारको ५१ प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व भएको कम्पनीको सब्सिडीयरी संस्था, फर्म वा कम्पनी, धार्मिक, साम्प्रदायिक उद्देश्य भएका र त्यस्ता गतिविधि गर्ने संस्थाबाट पार्टीले चन्दा लिने छैन । -
यसैगरी चन्दा दिने व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनीको नाम, ठेगाना र दिएको रकमको अभिलेख राखिनेछ । यस्तो विवरण प्रत्येक छ महिनामा नयाँ शक्ति नेपालको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिनेछ । प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा चन्दा संकलनको पूर्ण विवरण प्रकाशित गरिनेछ ।
नयाँ शक्ति नेपालले दाताको नाम र ठेगाना नखुलेको स्रोतबाट चन्दा, दान, दातव्य ग्रहण गर्ने छैन । यदि कुनै दाताले व्यक्तिगत सुरक्षाका कारण आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्न चाहेमा नयाँ शक्ति नेपालको आन्तरिक अभिलेखमा जनाई नाम सार्वजनिक गरिने छैन । तर नेपालको संविधान र प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले यस्ता दाताको विवरण माग गरेमा उपलब्ध गराइनेछ ।
पार्टीको चन्दा संकलन पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक हुनेछ । यस प्रयोजनका निम्ति दश हजार भन्दा माथिको चन्दा बैंक चेकबाट मात्र लिइने छ । चन्दाको लागि कसैलाई कुनै किसिमको दबाब दिइने छैन । प्रत्येक वर्षको बैशाख र कात्तिक महिना समय तोकी चन्दा संकलन अभियान चलाइने छ । नयाँ शक्ति नेपालको आधिकारिक परिचयपत्र, प्रचार सामग्री र चन्दाको लागि गरिएको अपिल सहित कम्तिमा पाँच जनाको समूहले घरदैलो कार्यक्रम गरी चन्दा संकलन गर्ने छन् । चन्दा लिएपछि चन्दाको रसिद दिइने छ र दर्ता पुस्तिकामा विवरण चढाई चन्दा दाताको दस्तखत लिइने छ ।
-प्रत्येक नगरपालिका तथा बजार र आर्थिक क्षेत्रहरूमा व्यवसायीहरूलाई ‘असल राजनीतिकालागि लगानी गरौं’ भन्ने समूहमा आबद्ध हुन प्रेरित गरिनेछ । यस्ता समूहसँग नयाँ शक्ति नेपालले आर्थिक नीतिहरू, लगानी तथा व्यवसायकालागि असल वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक सुधारका कार्यक्रम बनाउने र निरन्तर संवाद गर्नेछ । नयाँ शक्ति नेपालका कुनै पनि तहका सदस्यले आफ्नो निवासमा वा एक्लै चन्दा संकलन गर्न पाउने छैन । यसैगरी नेपाली नागरिकले नयाँ शक्ति नेपालको लेखा तथा हिसाबकिताब सम्बन्धी विवरण हेर्न चाहेमा निश्चित दिन र प्रक्रियाअनुसार उपलब्ध गराईने छ ।
-नयाँ शक्ति नेपालले पार्टी कार्यकर्ताहरुका लागि एक कल्याणकारी कोषको सञ्चालन गर्नेछ । यो कोष सञ्चालनका लागि छुट्टै ‘कल्याणकारीकोष सञ्चालन कायविधि’ निर्माण गरिनेछ ।
सदस्यहरुको सार्वजनिक उत्तरदायित्व अन्तरगत नयाँ शक्ति नेपालले उपहार र चन्दा जस्ता बिषयमा पनि सदस्यहरुको लागि सीमा निर्धारण गरेको छ । नयाँ शक्ति नेपालका सबै तहका पार्षदले एक वर्षमा एकै पटक वा पटक पटक गरी रु १,०००।०० भन्दा बढीको नगद वा जिन्सी उपहार लिन पाउने छैन । तर एकाघर परिवारका सदस्यले दिएको उपहार स्वीकार गर्न बन्देज हुने छैन ।